beautymaker – SHLAWIMI SHOP
Home Posts tagged "beautymaker"
Posted On February 22, 2019 at 5:24 pm by piano.chin / No Comments
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အလှပြင်တဲ့အခါ မည်သည့် makeup look မှာမဆို သေသပ်လှပတဲ့ မျက်ခုံးတစ်စုံကို ရရှိဖို့ကလည်း အရေးပါဆုံးဖြစ်သလို အသုံးပြုတဲ့ product ကလည်း ဆွဲရလွယ်ကူပြီး တစ်နေ့တာလုံးခံဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ဒါကြောင့် sis တို့ကို တစ်နေ့တာလုံးခံပြီး လှပတဲ့ဇင်ယော်တောင်မျက်ခုံးတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ BEAUTYMAKER Prouct တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်လိုဆွဲကြမလဲဆိုတာကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတယ်နော်
ပထမဆုံးလိုင်းဖော်တဲ့အခါ Eyebrow Palette ထဲက အရောင် အရင့်နဲ့ဆွဲပြီး မျက်ခုံးအတွင်းပိုင်းတွေကို အရောင်နုနဲ့ဆွဲမယ် 💋💋
2. အရောင်ပိုရင့်ချင်သောနေရာကို Eyebrow Pencil နဲ့ ထပ်ဆွဲပြီး 💋 3. နောက်ဆုံးမှ Eyebrow Manicure လေးသုံးပြီး brush လေးနဲ့ ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကို ညီအောင်ညှိပေးလိုက်ရင် ရပါပြီနော် 💋 💋 ခုဆိုရင် သဘာဝဆန်တဲ့ လှပတဲ့မျက်ခုံးလေးရပြီပေ့ါ ❣️ ❣️ BEAUTYMAKER #Beautymaker #Shlawimi
Posted On July 26, 2017 at 5:18 pm by piano.chin / No Comments
စစ်တို့ရေ makeup လိမ်းပြီးနေ့ 🌤တစ်ဝက်ရောက်တာနဲ့အဆီပြန်လို့ makeupတွေထက်ခါတလဲလဲပြန်လိမ်းနေရသလား? 😔 Beautymaker ရဲ့Matte Cushion လေးက 8in 1 makeup ကို double long lasting နိုင်ပါတယ် 💗 8in 1 ကဘာလည်းဆိုတော့ ❓ ❓ ❓ SPF 40** : တစ်နေ့တာရဲ့နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့UVA/UVB ကိုကာကွယ်ပေးတယ်
Long lasting : Oil တွေကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့ porous structure ကြောင့် makeup ကိုတစ်နေ့တာလုံးထိန်းပေးနိုင်တယ် Oil control : Niacinamide ပါဝင်သောကြောင့် အဆီပြန်ခြင်းကိုcontrol နိုင်တယ် Conceal : molecule powder အသားကနူးညံ့သောကြောင့်သင်coverချင်တာတွေကိုcover နိုင်ရတာပေါ့ Moisturizing : Hyaluronic Acid ပါဝင်တဲ့အတွက်ရေဓာတ်တွေကိုဖြည့်ပေးတာပေါ့ (အဆီပြန်ခြင်းဟာ အသားရေတွင်းခြောက်နေလို့ ပြန်တာဖြစ်တာကြောင့် ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့က အရေးကြီးတယ်) Tightening : Adenosine ပါဝင်သောကြောင့် အသားရေးကို lifts, tighten ဖြစ်စေနိုင်တယ် Astringent : Witch Hazel ပါဝင်သောကြောင့်ချွှေးပေါက်တွေကိုကျင်းစေနိုင်တယ် Conditioning : အသားရေလှပဖို့အရေးကြီးဆုံးဆီဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ကို balance ဖြစ်စေနိုင်တယ် အာနိတင်အပြည့်ဝကိုတစ်ဗူးထည်းမှာရယူနိုင်တဲ့ Matte Cushion လေးနဲ့သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအလှကိုဖန်တီးကြဆို့ 😉 💋 BEAUTYMAKER #beautymaker #shlawimi
Posted On July 26, 2017 at 3:55 pm by piano.chin / No Comments
အသားရေလှပပြီး နုပျိုချင်တာကတော့ မ်ိန်းလေးတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုပါပဲ။ အသားရေလှပပြီး နှပျိုဖို့အဓိကဂရုစိုက်ရမည့် အချက်ကတော့ UV ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ UV ကိုကာကွယ်နိုင်သော( SPF ပါသော) Product ကိုဘာကြောင့်သုံးသင့် သလဲဆိုတာကတော့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်( UVA, UVB) သည် သင့်၏အရေပြား ရေဓာတ်များကို လွယ်ကူစွာ ကုန်ခမ်းစေပြီး အသားရေတွန့်ခြင်း၊ ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း၊ တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝတ်ခြံဖြစ်ခြင်း စသော အရေပြားပြဿနာများကိုဖြစ်စေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကဘယ်လောက်ထိအရေအပြားကိုပျက်စီးစေနိုင်လဲဆိုတာကို 2012 The New England Journal of Medicine မှ ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သော American Truck Driver ၏အကြောင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီTruck Driver၏ ဘယ်ဖက်မျက်နာသည် ကားမောင်းသက်တမ်း 28 နှစ်တစ်လျှောက်လုံး ကားပြတင်းပေါက်နှင့် နီးကပ်နေသောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ ဒဏ်ကိုပိုမိုခံစားရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသောအခါ ဘယ်ဖက်မျက်နာ၏ ညီညွတ်မူသည် ညာဖက်မျက်နှာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိသာထင်ရှားစွာ ကွဲပြားခြားနားနေသည်ကို တွေ့ ရှိရသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် နေရောင်မှာသာမက အိမ်တွင်းရှိ ဖန်ချောင်းမှာလည်း ရှိသည်။ ဒါကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်( UVA, UVB) ကိုကာကွယ်နိုင်ရန် SPF ပါသော ပစ္စည်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင် ညအိပ်ချိန်က လွှဲ၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Oil Free Long Lasting Primer SPF 35** Perfect Essence Sunscreen SPF50** Matte Cushion SPF 40** BEAUTYMAKER ရဲSPF အပြည့်ပါတဲ့ Oil free long lasting Primer, Perfect Essence Sunscreen, Oil Free Matt Cushion လေးတွေနဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပြီး အသားရေ၏အလှကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အစဉ်အမြဲကာကွယ်ထားပြီး သင့်၏ နုပျိုမှုကို ထိန်းတိမ်းလိုက်ပါ။ Make your beauty with BEAUTYMAKER!!!